XOG: Shuruudaha uu Axmed Madoobe ku xiray wada hadalka Villa Soomaaliya | SMC
Home WARARKA MAANTA XOG: Shuruudaha uu Axmed Madoobe ku xiray wada hadalka Villa Soomaaliya
XOG: Shuruudaha uu Axmed Madoobe ku xiray wada hadalka Villa Soomaaliya
Maamulka Jubaland ayaa shuruud ku xiray wadahadal ay la furaan dowladda Soomaaliya, si xal looga gaaro khilaafka taagan ee salka ku haya diidmada dowladda ee doorashadii August ka dhacday Kismaayo ee uu ku soo baxay Axmed Madoobe.
Madaxweyne Kuxigeenka maamulka Jubaland oo wariyayaasha kula hadlay madaxtooyada Jubaland ayaa sheegay in loo baahan yahay sii deynta Wasiirka Amniga Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan), kaasoo ku jira xabsi ay maamusho Sirdoonka Soomaaliya.
Maxamuud Seyd Aadan ayaa madaxda ugu sareysa dalka, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inuu Ciidamo Itoobiyaan ah ku uruurusanayo gobolka Gedo, si ay u bur buriyaan maamulka uu Hoggaankeeda hayo Axmed Madoobe.
Xukuumada Soomaaliya ayuu sheegay iney dhibaatooyin hor leh ku wado Jubaland, taasoo saameyn ku yeelan karta dadka Shacabka ah, iyadoo looga digay inuu Muqdisho ugu sii xirnaado Wasiir Janan oo ahaa shaqsiga Axmed Madoobe u xilsaartay dhaq dhaqaaqyada isaga ka dhanka ah ee Gedo.
Previous articleDhageyso:-Digniin loo diray Ciidamada ku sugan Guriceel & Ceeldheere
Next articleDhageyso Dhacdo xanuun badan oo Loogaystay Wiil D&M Ah oo lagu gubay Gobolka galgadud degmada dhusamared arin